Okufanele ukwenze ukuze uyeke ukucabanga ngomlingani wangaphambili | Bezzia
Okufanele ukwenze ukuyeka ukucabanga ngomlingani wangaphambili
UMaria Jose Roldan | 21/06/2022 22:59 | Ubudlelwano
Akulula noma kulula ukuqeda ubuhlobo. Ukuvula ikhasi isikhathi esinzima kubantu abaningi, ikakhulukazi uma ungayeki ukucabanga ngomuntu obukade uthandana naye usuku lonke. Ngalokhu, kubalulekile ukudlula ezigabeni ezihlukene zosizi futhi ukwazi ukwakha kabusha impilo ngendlela engcono kakhulu.
Esihlokweni esilandelayo sizokunikeza uchungechunge lweziqondiso ezingakusiza ukuthi ukhohlwe ngowayengumlingani wakho.
1 Hlonipha isigqi sosizi
2 Imizwa iyasebenza futhi iyadingeka
3 Thola okuthile okukugcwalisa ngenkohliso
4 Kufanele uvule ikhasi bese ukhohlwa ngozakwethu wangaphambili
5 hamba kuchwepheshe
Hlonipha isigqi sosizi
Ezikhathini eziningi, iphutha elikhulu lenziwa ngokubeka umqondo wokuyeka ukucabanga ngomlingani wangaphambili. Kuvamile ukuthi kunzima ukuyeka ukucabanga futhi ukukufeza kuyinto ezothatha isikhathi sakho. Kufanele ukwazi ukuhlonipha isigqi sokulila futhi ubekezele kuze kufike isikhathi lapho kungekho mcabango ngomlingani wangaphambili.
Imizwa iyasebenza futhi iyadingeka
Ukuhlukana nomlingani wakho kuzovusa uchungechunge lwemizwa yazo zonke izinhlobo, kusukela osizini kuya ekulangazeleleni noma ekubeni necala. Kuvamile ukuthi lezi zinhlobo zemizwa zenzeke futhi yingakho kubalulekile ukuzifakazela. Ukuvumela imizwa enjalo kuyisihluthulelo lapho kuziwa ekuvuleni ikhasi nokuqeda ukuhlukana.
Thola okuthile okukugcwalisa ngenkohliso
Kubalulekile ukubheka okuthile okungabuyisela inkohliso elahlekile. Noma yini ihamba ukuze uyeke ukucabanga ngozakwethu wangaphambili futhi uphile ngokuqiniseka nethemba usuku nosuku. Ukuziphazamisa ngezinto ezithile zokuzilibazisa noma izithakazelo kuzokuvumela ukuba uhlale usesimweni futhi ujabulele ukuphila.
Kufanele uvule ikhasi bese ukhohlwa ngozakwethu wangaphambili
Kufanele wazi ukuthi uvula kanjani ikhasi futhi uqaphele ukuthi umjikelezo usufike ekugcineni. Ukwenza lokhu, isiko elingokomfanekiso lingenziwa futhi izibopho zinqanyulwe ngokuqinisekile nozakwethu wangaphambili. Isiko liyisihluthulelo uma kuziwa ukuyeka ukucabanga ngomuntu futhi ukwazi ukujabulela impilo entsha.
Uma kunesidingo, ungacela usizo kuchwepheshe. Abantu abaningi abakwazi ukunqamula ubuhlobo nomlingani wabo wangaphambili bodwa futhi bazodinga usizo lochwepheshe. Noma yiluphi usizo luncane uma kuziwa ekwamukeleni ukuhlukana nokugwema noma yiluphi uhlobo lomcabango ngozakwethu wangaphambili.
Ngamafuphi, akulula ukuyeka ukucabanga ngomlingani wangaphambili. Umuntu ngamunye uhlukile, ngakho-ke ukwazi ukuthi ungayiqinisekisa kanjani imizwelo ehlukene futhi uvumele isikhathi sokuphulukisa wonke amanxeba kubalulekile. Kubalulekile ukuthi ungazihluleli ngendlela engalungile ngokucabanga ngomlingani wakho wangaphambili futhi wenze konke okusemandleni ukuze ubuhlungu bungapheli ngokuhamba kwesikhathi. Ngezinye izikhathi ukuzimaka noma ukubeka imigomo ethile kungakusiza unqobe usizi. Khumbula ukuya kuchwepheshe uma kwenzeka ungakwazi ukuqeda imicabango enjalo ekhanda lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Okufanele ukwenze ukuyeka ukucabanga ngomlingani wangaphambili
Izinhlelo zokusebenza zokuqomisana ziyaqhubeka nokukhula e-Spain
Ama-glutes aqinile okunakekela umhlane wakho